Shir Qaran Oo Looga Hadlayo Dib U Habeynta Caafimaadaka Oo Ka Furmay Muqdisho * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, November 7, 2013: Shir heer qaran ah oo looga hadlayo caafimaadka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho, waxaana ka qeyb galaya xirfadleyaal caafimaad iyo ergo dalka iyo dibadda isaga kala timid.
Raiisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay shir heer qaran ah oo ku saabsan caafimaadka dalka Soomaaliya, Shirkan oo ah kii ugu horreeyey noociisa, ayaa waxaa ka soo qaybgalay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiiradda, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, wakiillo ka kala socday gobolada dalka, xirfadleyada caafimaadka Soomaaliya, wakiilada haydaha qaramada midoobey iyo marti sharaf kale.
Shirkan oo saddex maalmood soconaya ayaa looga arrinsanayaa midaynta arragtida xirfadlayaasha caafimaadka Soomaaliya, si caafimaadku uga qaybqaato dhismaha nabadda iyo dowladnimada Soomaaliya. Xirfadlayaal caafimaad oo gaaraya 270 qof iyo ergo ka timid gudaha iyo dibadda dalka oo gaaraysa 400 qof ayaa la filaya in muddada saddexda maalmood ah ay ku soo saaraan talooyin ku aadan dib-u-habaynta nidaamka caafimaadka Soomaaliya.
Wasiirka horumarinta adeegga bulshada Drs Maryam Qaasim Axmed ayaa sheegtay in caafimaadka iyo waxbarashada Soomaaliya aanay ahayn arrimo la siyaasadayn karo, balse loo baahan yahay in dhammaan dhinacyada Soomaalidu ay ka wada shaqeeyaan, islamarkaana ay shirkan ay goobjoog ka yihiin xubno ka kala socda dhammaan gobolada dalka Soomaaliya, iyadoo sidoo kale Ra’iisul wasaaraha ku ammaantay hoggaamintiisa suuragelisay hirgelinta isbeddelada iyo shirarka laga qabtay dalka.
“Markii aan xafiiska imi waxaan la dagaalanay dhaqankii xumaa ee muddadii 20-ka sano ahayd lagula dhaqmayey dalka Soomaaliya ee ka horjeeday dowladnimadeena, waxaan la fariistay hay’adaha beesha caalamka, waxanuna samaynay isla-xisaabtan. Inkastoo ay jiraan caqabado, hadana, waxaan muujinnay geesinimo, waxaana aragtidayadu tahay in qoys kasta oo Soomaaliyeed uu helo adeeg caafimaad oo ku filan” sidaasi ayery tiri Drs Maryam Qaasim Axmed
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” oo hadal ka jeediyey shirka ayaa sheegay in shirkan uu yahay kii afraad ee heer qaran ah ee xukuumaddiisu qabato, waxana uu xusay in marka laga tago muhiimadda kowaad ee xilligan xaadirka ah uu ammaanka qaranka u leeyahay, in caafimaadka iyo waxbarashadu ay ugu jiraan kaalinta labaad”
“Waxaan qabanay afar shir oo hore oo heer qaran ah, ujeedada aan u qabanayno shirarkan waxa weeye talada dalka waxaa nala wadaaga ummaadda Soomaaliyeed, annaguna waxaan nahay adeegayaashii dalka.Marka laga tago ammaanka xukuumaddaydu waxay muhiimad siisay adeegga bulshada, waxana dhawaan samayn doonaa in caafimaadka iyo waxbarashadu ay noqdaan wasaarado madaxbanaan” sidaasi ayuu yiri Ra’iisul wasaare Saacid.
Ra’iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon ayaa tilmaamay in xirfadlayaasha caafimaadka Somaaliyeed ay kaalin weyn uga banana tahay dib-u-dhiska Soomaaliya, isagoo balan qaaday in xukuumaddiisu ay si dhab ah u qaadanayso talooyinka shirka.
Shirkan oo ay soo agaasintay wasaaradda horumarinta adeegga bulshada ayaa ku soo beegmaya iyadoo isbeddelo horumarineed laga sameeyey dhinacyada siyaasadda, ammaanka iyo adeega bulshada Soomaaliya, islamarkaasina lagu jiro waqti dalku hiigsanayo horumar dhinacyo badan taabanaya.
Waa shirkii afaraad oo heer qaran ah oo lagu qabto magaalada Muqdisho tan iyo markii sanad ka hor la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana horay loo qabtay shirar looga hadlay dib habeynta garsoorka, amaanka iyo siyaasadda iyo waxbarashada.
Belgium Encourages Piracy Operations over Somalia Coast says Dau